Ankizy sy ny tahotra ny tsindrona - Family blog Lifestyle
Dokotera maro no manandrana manelingelina kely ny marary rehefa heverina fa misy tsindrona, satria fantatry ny mpitsabo mazava fa maro ny olona, ​​ary indrindra ny ankizy no matahotra tsindrona.
Ohatra, ny dokotera sasany dia manandrana mampiditra ilay zaza amin'ny resaka iray hanomezana ilay zaza tsindrona nefa tsy tsikaritr'izy ireo akory ny fitantanan'izy ireo. Misy ihany koa ny zavatra azon'ny ray aman-dreny atao hanampiana hanala ny tahotra ny zanany amin'ny tsindrona.
Mampanantena zavatra tsara aorian'ny fizahana ny dokotera
Miparitaka be eo amin'ny ankizy ny tahotra fanindronana ary noho izany antony izany no iharan'ny ray aman-dreny maro io olana io. Indraindray tsy mora ny manaisotra ny tahotry ny zaza. Marina indrindra izany raha toa ka efa nanana traikefa ratsy tamin'ity faritra ity ilay zaza.
Na izany aza, misy tetika kely isan-karazany izay afaka manampy ny fitsidihan'ny dokotera ho avy ho mahafinaritra kokoa ho an'ilay zaza. Ohatra, azo atao ny manolotra traikefa tsara ny zaza, toy ny fitsidihana trano fanaovana gilasy, raha azo omena tsindrona tsy misy fikorontanana be ilay zaza.
Na izany aza, tsy mandeha foana io, satria misy ny ankizy izay ny tahotra fanindronana dia lehibe loatra fotsiny. Amin'ireto tranga ireto dia misy dikany ny manondro amin'ny dokotera fa mahatahotra ilay zaza. Mety hanana hevitra ny dokotera amin'ny fanalana ny tahotra amin'ny tsindrona. Amin'ny ankapobeny, tombony izany raha ampazavaina mazava tsara amin'ilay zaza amin'ny dingana voalohany fa ilaina fotsiny ny maka tsindrona amin'ny dokotera indraindray.
Ny tsy fandresena ny tahotra ny tsindrona dia mety hiteraka ilay zaza mitazona ny tahotra mandra-pahafatiny. Mazava ho azy fa misy dikany ny tsy famelana azy hanao izany hatrany aloha. Izany no mahatsara raha tsara ny ray aman-dreny raha mahita fomba hanafoanana ny tahotry ny zanany. Azo antoka fa afaka manampy amin'ny fomba sasany ny dokotera.
Ny pejy fandokoana dia matahotra handositra | Fihetseham-po
Tahotra pejy fandoko | Fihetseham-po
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 11. September 2020 16. Oktobra 2020 Sokajy fampianarana, fahasalamana sy sakafo mahavelonaKeywords Matahotra tsindrona, dokotera, Fitsidihan'ny dokotera, syringe, Syringes
indray Lahatsoratra taloha: Turmeric - Ny zava-manitra mbola hafakely
more Lahatsoratra manaraka: Sakafo mamy ho an'ny ankizy